ဘဝမှတ်တိုင်: ✏ViioPhone_v2.0 Apk For Android✏
✏ViioPhone_v2.0 Apk For Android✏
Viio ဆိုတဲ့ application လေးဟာဆိုရင်
မိမိတို့ android ဖုန်းကို ဖောက်ထွင်းပြီး မြင်ရအောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့် apk လေးပါ။
ကိုယ်ဖုန်းခေါ်ချင်တဲ့ အခါမှာ နံပါတ်ရိုက်တဲ့ keypad ကို ဖောက်ထွင်းပြီး မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကတော့……
လမ်းသွားနေရင်းနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို နှိပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဖုန်းကို ခေါင်းငုံ့ ကြည်ပြီး နံပါတ်ရိုက်တာ (ဒါမှမဟုတ်) contact ရှာရတဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ရှေ့ မှာ ဘာတွေရှိသလည်းဆိုတာကို ဖုန်းရဲ့ ကင်မရာကို
auto အသုံးပြုပြီး ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
dialer နဲ့ contact နှစ်မျိုးစလုံး အသုံးလို့ရပါတယ်။
-Apk File Size 117KB ပဲရှိပြီး
-Android OS Version 2.2 နှင့်အထက်ရှိထား သောဖုန်းများမှာ ထည့်သွင်း installing လုပ်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ-
-အောက်က နှစ်သက်ရာ လင့်ခ် တစ်ခုမှ ဒေါင်းလုပ်ရယူသွားပါ-
Description Voii phone converts your mobile phone inatransparent phone, you will be able to make calls and see what is going on the other side of the phone. There is no need to stop looking at your phone while dialingatelephone number.
You will be able to walking in the street and using your phone, at the same time, without having to worry about street obstacles such as holes, streetlights, stairs, etc.
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 4/10/2014 06:09:00 am